Articles tagged 'zarnet'
Telecel takeover above board 23 November 2016 HARARE - Netherlands-based integrated telecommunications services operator, VimpelCom, says the disposal of its 60 percent shareholding in Telecel Zimbabwe (Telecel) was above board. This was after Empowerment Corporation (EC), which owns 40 percent in the local mobile operator, had recently t...
New twist to Telecel takeover 18 November 2016 HARARE - The disposal of Telecel Zimbabwe (TZ) by its international parent VimpelCom Limited (VimpelCom) continues to be mired in controversy as James Makamba's Empowerment Corporation (EC) has threatened to sue the Netherlands-based company over pre-emptive rights in the 60 percent sale. This...
Telecel's VimpelCom seeks Mugabe's help 10 May 2016 HARARE - Amsterdam-based mobile phone operator VimpelCom is seeking President Robert Mugabe's assistance to secure an outstanding $30 million from the sale of its 60 percent shareholding in Telecel Zimbabwe (Telecel). People privy to goings-on at the Nasdaq-listed telecommunications company to...
We still own Telecel — VimpelCom 25 February 2016 HARARE - Vimpelcom Limited (VimpelCom) says it still owns a majority stake in Telecel Zimbabwe (Private) Limited (Telecel), as negotiations with the government over the 60 percent buy out continue. Last year, VimpelCom was pressured by President Robert Mugabe's administration to sell its stake...
Telecel deal to be finalised 22 January 2016 HARARE - President Robert Mugabe's government was this week expected to pay VimpelCom Limited (Vimpelcom) about $30 million in outstanding funds for a 60 percent stake in Telecel Zimbabwe (Telecel), businessdaily has learnt. Although company executives, including chief executive Angeline Vere,...